स्वावलम्बन लघुवित्तको खुद नाफा घट्यो - प्रति सेयर आम्दानी कति? - Business Awaj
Home Microfinance स्वावलम्बन लघुवित्तको खुद नाफा घट्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति?
स्वावलम्बन लघुवित्तको खुद नाफा घट्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति?
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तेश्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्तले यस त्रैमासमा १४ करोड २९ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवदीमा ३० करोड २७ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । तुलनाको अवधिमा खुद नाफा ५२.७९ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस अवधिमा लघुवित्तले ५ अर्ब ४ करोड कर्जा सापटि र १० अर्ब ४२ करोड निक्षेप संकलन १६ अर्ब ५६ करोड कर्जा विस्तार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब १२ करोड कर्जा सापटि र ९ अर्ब ५ करोड निक्षेप संकलन गरी १५ अर्ब ७२ करोड कर्जा बिस्तार गरेको थियो ।
कम्पनीको खुद व्याज आम्दानी १ अर्ब २ करोड रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड २८ लाख रहेको थियो । त्यसैगरी सञ्चालन घाटा १ करोड ७४ लाख रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४८ करोड ५ लाख रहेको थियो ।
मुख्य आम्दानीको श्रोत खुद व्याज आम्दानी बढे पनि ८१ करोड बारबार प्रोभिजन गर्दा खुद नाफामा भारी गिरावट देखिएको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी ९४ करोड ३० लाख रहेको छ भने जगेडा कोषमा १ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।
लघुवित्तको निष्कृय कर्जा अनुपात १.७० प्रतिशतबाट बढेर १५.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी रु २०.२१ रहेको छ भने नेटवर्थ २३७.१३ रहेको छ । त्यसैगरी मुल्य आम्दानी अनुपात ९४.३१ गुणा रहेको छ ।
Previous articleसिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्सको खुद वीमाशुल्क १०९ प्रतिशतले बृद्धि
Next articleप्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मुल्य समायोजन पछि कति?
डिप्रोक्स लघुवित्तको साधारणसभा आह्वान – बुक क्लोज कहिले?
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले गर्यो बोनस सेयर घोषणा